Agoosto | 2009 | WEEJIDOW
Archive for Agoosto, 2009
Sheekh Shariif oo Booqsho ku tagay Imaaraadka Carabta
Agoosto 30, 2009
Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xubno waheliya ayaa maanta booqasho ku tagay Dalka Imaaraadka Carabta sida ay shaacisay Wakaalada Wararka ee Imaaraadka ee ENA , waxayna Wakaaladu xustay in Sheekh Shariif uu la kulmi doono Madaxda Sar Sare ee Imaaraadka kuwaas oo uu ugu horeeyo Madaxweyne Sheekh Khaliifa Bin Saayid Alla Nahyaan .
Wakaaladu ma aysan carabaabin inta ay qaadan doonto booqadasha Sheekh Shariif iyo Waftigiisu ,waxayna Wakaaladu xustay in wada hadalo ay yeelan doonaan Shariifka iyo Mas’uuliyiin kala duwan oo Imaraatiyiin ah .
Sidoo kale waxa ay Wakaaladu ay sheegtay in Madaarka uu ku soo dhaweeyay Wasiirka Cadaalada Imaaraadka Dr Haadif Nin Jowcan Al-Dahiri , waxyana wakaaladu intaa ku dartay in soo dhaweynta Sheekh Shariif iyo waftigiisa uu sidoo kale ka qeyb galay Safiirka DKMG ah u dhafiya Imaaraadka Carabta Axmed Maxamed Cigaal.
Ilaa iyo hadda si cad looma oga waxa uu ku saabsan tahay booqashada uu Shariifku ku tagay Imaaradka waxayna booqashadi u muuqataa mid aan horey loo sii shaacin , waxyana sida muuqata qeyb ka noqoneysaa safardii uu shariifku ku tagi jiray wadamada carabta.
War deg deg ah: Booliska S/land oo maanta rasaas u adeegsaday dadweyne isugu soo baxay xarunta Baarlamaanka
Xarunta Golaha wakiilada Maamulka S/land waxaa maanta ka dhacay isu soo baxyo iyo Mudaharaadyo ann qorsheysnayn oo ay dhigayaan dadweyne fara badan oo ka cadhaysnaa fara gelin AY ciidamada amaanku ka sameeyeen golaha wakiilada dhexdiisa.
Mudaharaadadan ayaa ka dhashay fadhigii maanta ee golaha wakiilada oo la keenay ciidamo aad u fara badan oo boqolaal ah kana badan kuwii shalay kuwaas oo rasaas fara badan ku riday shacabiga ku suganaa xayndaabka xarunta Wakiilada .
Dadweynaha mudaharaadayey ayaa ku dhawaaqaya ereyo lidi ku ah Maamulka Riyaale iyaga oo ku dhawaaqaya is casil, ha dhaco Riyaale Daahir Rayaale ayuu dalkani eeday, Dimuquraadiyaddii ayuu Daahir Burburiye .
Ciidamada Ilaalada Madaxtooyada iyo Booliska ayaa rasaas Nool ooda kaga qaaday Dadweynihii isu soo baxay, waxayna Baacsadeen Dadweynaha iyaga oo u adeegsanyaan rasaas nool oo ay ku ridayaan Dadweynaha sidoo kale waxay u adeegsadeen Budhadh Ulo iyo Qoryaha dabadooda kuwa ay gaadhaan , dadweynahaas oo u badan Dumar iyo dhalinyaro waxay Ciidamadu qabqabteen Tiro dad ah oo ay ku gureen baabuurta Bilayska .
Sidoo Kale Saraakiisha Booliska ayaa ka hor istaagay qaybaha saxaafada inay galaan xarunta wakiilada iyadoo ay iska dhaga mareen codsi shirgudoonka ka yimi oo ahaa in la soo daayo saxafada .
Ka hor intaa aan dadweynaha Rasaasta lagu kala eryin ayaa waxa soo baxay Gudoomiyaha Wakiilada oo dadkii u sheegay in fadhigi ku dhamaaday si degan guddina ay u saareen xalinta arintan goluhuna ay fasax galiyeen bari isuguna soo noqon doono maalinta salaasada sidaana ay ku kala dareeraan Dadweynuhu kana tagaan bacadka.
Geesta Kale Dadweynaha Gadoodsanaa ayaa Wasiirka Duulista Hawada Md Cali Warancade ayay dadkii Mudaharaadayay ku joojiyeen Wadada Tagta Madatooyada isga oo maraya iyaga oo ku dhawaaqayay hadii aad wax dhawrsanayso .
Waa inaad is casisho.
gadoodkan ka dhacay magaalada hargeysa ayaa daba socda khilafaad cakiran oo hadheeyey maamulka S/land kasoo ka dhaxeeya hogaamiyayaasha xusbiyada mucaaridka iyo Hogaanka sare ee s/land, golayaasha barlamaanka oo dhexdooda uu ka abuurmay qas iyo qalalaase keenay gacan ka hadal, iyo golaha guurtida oo laftiisu qayb ah khilaafaadka taagan.
Isku soo duuboo siyaasadda S/land ayaa u muuqata mid gashay xaalad cakiran oo aanay muuqan wadooyinkii ay xalka maadaaba ay hayadihii samata bixintu ay manta qayb ka yihiin mashaakilka siyaasadeed ee ka jira S/land.
Ciidamada Daraawiishta oo maanta la wareegaya Ex Koontarool Afgooye
Ciidamada Daraawiishta Dowladda KMG ayaa maanta la filayaa inay la wareegaan Ex Koontarool Afgooye, halkaasoo bilihii la soo dhaafay ka jireen falal ammaan daro iyo dhibaato shacabka kala kulmayeen Ciidamada ku sugnaa halkaas
Taliye Kuxigeenka Ciidamada Daraawiishta Afrax Cali Afrax ayaa sheegay in Ciidamada la wareegayaan maanta Ex Koontarool Afgooye, waxaana uu cadeeyay in ammaanka halkaas sugayaan.
Waxaa uu sheegay in loo diyaariyay Ciidamo fara badan oo halkaas adkeeya ammaankeeda, waxaana uu tibaaxay in hada kadib aanu jirin doonin dhibaato ay halkaas kala kulmaan dadka shacabka.
Wadada Ex Koontarool oo ay isticmaalaan gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho iyo Afgooye ayaa waxaa halkaas looga qaadayay Lacago Isbaaro ah oo Ciidamo ka tirsan Dowladda ka qaadayeen gaadiidka.
Sidoo kale Ex Koontarool ayaa mudooyinkii u dambeeyay aheyd mid marti u noqotay dagaalada ku dhex mara Ciidamadii ku sugnaa iyo Xoogaga Hubeysan, waxaana la ogeyn sida ay wax uga badalayaan Ciidamada Daraawiishta.
Ciidamadan Daraawiishta ayaa inta badan ku guuleystay sugida ammaanka, iyagoo goobo dhowr ah ka qabtay ciidamada dhaca geysta ee shacabka ay ka caban jireen, waxaana tallaabada ay kula wareegeen halkaas soo dhoweeyay gaadiidleyda ka shaqeysa.
Muuse Caraale “Ethiopia meel walba waa naga soo dagtay, dalkaan dalal badan ayaa ku loolamaya”
Muuse Caraale oo sheegta Xoghayaha gaashaandhiga Xisbul Islaam ayaa sheegay in Quwado shisheeye ay ku loolamayaan dalka Soomaaliya, isagoo cadeeyay in Ciidamada Ethiopia ay soo buuxiyeen gobolada dalka.
Isagoo maanta Wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Muqdisho ayuu sheegay Mr Caraale in Ethiopia iyo AMISOM ay duulaan ku yihiin Shareecada Islaamka, waxaana uu carabaabay in fara gelin qaawan ku hayaan.
“Ethiopia Goboladii ayay soo buuxisay, Beled weyn, ayay timid, Gedo waa ku jirtaa, Gobolada Dhexe iyo meelo kale waa wada joogaan, marka dalkaan ayaa lagu loolamayaa”ayuu yiri Muuse Caraale.
Waxaa uu sheegay in Dowladda KMG ay leedahay mas’uuliyada soo gelitaanka Ciidamada Ethiopia iyo dhibaatada ka dhalata, isagoo ka gaabsaday inay dagaal la galayaan iyo in kale.
Maalintii shalay ayay aheyd markii Ciidamada Ethiopia oo dabaabaad wata ay gudaha u soo galeen Magaalada Beled weyn, taasoo xaalada guud ee magaalada ka dhigtay mid ay la wareegaan maamulkeeda.
War deg deg ah:Taliska Booliska dowladda KMG oo galabta soo bandhigay Maydka nin ay ku sheeegeen in uu ka tirsanyahay Xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda
Taliska Booliska dowladda KMG Soomaaliya ayaa galabta waxa uu soo bandhigay Maydka nin ay ku sheeegeen in uu ka tirsanyahay Xoogaga hubaysan ee ka soo horjeeda dowladda KMG Soomaaliya.
Gabaldhicii galabta ayaa afhayeenka Ciidanka Booliska dowladda KMG Soomaaliya gaashaanle sare C/laahi Xasan Bariise oo shirjaraa’iid ku qabtay Xarunta CID ee Magaalada Muqdisho ayaan inta uusan qaban shirka jaraa’iid waxa uu soo bandhigay Maydka nin dhalinayaro ah oo ay ku yaaleen rasaas kaasi oo uu sheegay in ay toogteen Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya xilli uu kuguda jiray rasaasayn uu ku waday darawalka taliyaha laanta socdaalka Airporka Magaalada Muqdisho Generaal Gaafow sida uu Baariise hadalka u dhigay.
Waxa uu sheegay Bariise in ninka geeryooday iyo 2-kale ay weerar ku soo qaadeen gaari uu lahaa Gaafow iyagoona rasaas ku furay darawalkii saarnaa gaarigaasi isagoona sheegay in darawalku ay ku dhaawaceen rasaastaasi.
Bariise ayaa waxa uu intaasi raaciyay in Ciidamo katirsan kuwa dowladda KMG Soomaaliya oo ka akdhawaa goobta ay ku soo baxeen dhawaqa rasaasta iyadoo xilligaa kadibna ay israsaaseyn dhaxmartay Ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kooxo uu sheegay in weerar ay ku soo qaadeen gaarigaasi sida uu hadalka u dhigay.
Ugu danbayntii Bariise waxa uu sheegay in rasaasta la iswaydaarsanayay ay sababtay geerida mid kamid ah dhinacyadii weerarka ku soo qaaday gaariga uu lahaa taliyaha laanta socdaalka Airporka Magaalada Muqdisho Gaafow.
War Deg Deg ah: Dagaal mar kale caawa dib uga soo cusboonaaday qeybo ka mid ah W/Muqdisho
Agoosto 29, 2009
Dagaalo ayaa caawa fiidkii mar kale dib uga soo cusboonaaday qeybo ka mid ah xaafadaha W/Muqdisho, kadib dagaalo joogta u noqday oo bilihii la soo dhaafay ka dhacayeen.
Dagaaladan ayaa u dhaxeeya Ciidamada Dowladda iyo Kooxaha ka soo horjeeda ee isku hor fadhiyay aagaga waqooyi bilihii u dambeeyay, waxaana dagaalkan imaanayaa waqti xaalad degenaansho ka jirtay deegaanada Waqooyi.
Shacabka fara ku tiriska ee ku sugan deegaanada Waqooyiga ayaa soo sheegaya in dagaalada ay bar bar socdaan Duqeymo xoogan, iyadoona dagaalka ka socdo Xaafado ka tirsan Shibis iyo C/casiis, gaar ahaan Beexaani iyo Stadium Koonis.
Xoogaga Hubeysan ayaa bilihii la soo dhaafay gacanta ku hayay inta badan deegaanada Waqooyi, waxaana dagaalo faraha looga gubtay uga soo saareen Ciidamada Dowladda.
Ma cada qasaaraha rasmiga ee uu geysanayo dagaalka, hase ahaatee xaalada oo ah mid kacsan isla markaana xilligu yahay mid habeen ayaa la sheegi karin inta uu la ekaan karo qasaaraha dagaalada geysanayaan.
War Deg Deg ah: Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo ku dhawaaqay dagaal hor leh oo ay kaga soo horjeedaan Ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda KMG Soomaaliya.
Maadaama ay maanta boqolaal Ciidmada Itobiya soo galeen Beledweyne ee gobolka Hiiraan isla markaana ay la wareegeen amaanka magaaladaas ayaa Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin ayaa galabta waxa ay shaaca ka qaadeen in ay bilaabayaan dagaal cusub oo ay kaga hortagayaan Ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Sheekh Cali Maxamuud Raage oo ah afhayeenka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo galabta Shir jaraa’iid u qabtay qaar kamid ah warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay labo jibaarayaan dagaalka ay kala soo horjeedaan ciidamada dowladda KMG Soomaaliya iyo kuwa Shisheeye ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya.
Waxa uu afhayeenku sheegay in dagaalkaasi uu soo bilowday 1-da bishan Ramadaan ee sanada 1430-hijriyada islamarkaana uu socondoono ilaa iyo 6-da bisha Shawaal ee soo socota isagoona sheegay in dagaalkaasina ay u bixiyeen magac cusub.
Afhayeenka Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in saakay Waaberigii Ciidamada Ethiopia ay soo galeen gudaha Magaalada Baladweyne ee Xarunta gobolka Hiiraan waxaana uu ku eedeeyay Ciidamada Ethiopia in dhac baahsan iyo dilalba ay ka gaysteen xaafadaha ku yaala Galbeedka Magaalada Baladweyne oo horay ay ugu sugnaayeen Ciidamada Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin inta saaka waaberigii aanay soo galin Ciidamada Ethiopia.
Gobolka Hiiraan oo dhaca bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa bilihii aynu ka soo gudubnay ka jiray xiisado, iyadoo mararka qaarna ay ka dhacayeen dagaalo gudaha magaalada Caasimada u ah gobolka Hiiraan ee Baladweyne.
Dhawaan uun ay ahayd markii Ciidamada Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa dowladda KMG ay ku dagaalameen degamada Buulo burde ee isla gobolkaasi Hiiraan iyadoona haatana Magaalada Baladweyne oo uu ka jiro Maamulka dowladda KMG ah ay ku suganyihiin Ciidamo Ethiopian ah.
Ciidamo Ethiopian ah iyo kuwa dowladda oo maanta Fariisimo ka sameystay Galbeedka Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Ciidamada dowladda KMG ee Soomaaliya oo gacan ka helaya kuwa Ethiopia oo xalay galay Galbeedka Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay fariisimo ka sameysteen galbeedka Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo qaar ka mid ah ciidamada dowladuna ay dhac iyo dil geysteen.
Kadib markii saakay aroornimadii hore ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa Ethiopia ay galeen Xaafadda Howlwadaag ee dhinaca Galbeed ee Magaalada Baladweyne oo ay ka ariminayeen dhaq dhaqaaqa Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa xaaladu haatan waxaa ay tahay mid degan.
Isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa waxaa uu u muuqdaan kuwa si caadi ah ku soo laabanaya inkastoo wali goobaha ganacsiga ay xiranyihiin.
Rasaas ay rideen ciidamada dowladda ayaa waxaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen labo qof oo rayid ahaa sida ay Waajidpress u sheegeen goobjoogayaal la hadlayay warbaahinta kuwaasi oo intaasi raaciyay in qaar ka mid ah ciidamada dowladda ay dhac u geysteen xarumo caafimaad iyo goobo waxbarasho oo ku yaala dhinaca Galbeed ee Magaalada Baladweyne.
Meelaha ay ciidamadu dhaca u geysteen ayaa waxaa ka mid ah Jaamacadda Baladweyne sida uu Waajidpress u sheegay masuul ka tirsan Jaamacadaasi kaasoo sheegay in ciidamadu ay bur buriyeen Kumbiyootaro yaalay Jaamacadda islamarkaana ay horay u qaateen lacag taalay Xafiiska Jaamacadda taasoo uusan carab baabin cadadeeda.
Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ciidamadaasi oo is garabsanaya ay gudaha u galeeb xaafadaha galbeedka Baladweyne ayaana waxaa jirin masuul si rasmi ah uga hadlay howlgalkii saakay ciidamada dowladda ay ka fuliyeen dhinaca galbeed ee Magaalada Baladweyne iyagoo kaashanaya.
Ciidamada Ethiopianka ayaa waxaa ay faaurijeen guud ahaan xarumihii ay saakay dageen Magaalada Iyagoona fariisin ka dhigtay Buurta Jante Kundishe oo bariga Magaalada ka Xigta.
Wafdi uu hogaaminayo Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo u anbabaxay dalka Liibiya si ay ugu qeyb galaan Kulanka Madaxda Africa ee ka dhacaya dalkaasi.
Wafdi ka socda Xukuumada KMG ee Soomaaliya oo uu hogaminayay Ra’iisul wasaare Sharma’arke ayaa maanta waxaa ay ka anba baxeen Magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda wadanka Liibiya halkaasi oo ay kaga qeyb galayaan kulanka Madaxda Midowga Africa.
Wafdigaan ka socda dowladda KMG ee Soomaaliya ayaa waxaa horkacayay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda KMG ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharma’arke iyadoo ay qeyb ka ahaayeen Wasiirka qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga C/raxmaan C/shakuur,Wasiirka Qalabeynta iyo hantida Qaranka Max’ed Mursal iyo saraakiil kale,waxaana wafdigaan ay ku wajahanyihiin dalka Liibiya.
Wafdiga Ra’iisul wasaaraha ayaa inta uu ku suganyahay dalka Liibiya waxaa la qorshaynayaa in madaxda dalkaasi uu kala hadli doono arimaha Tahriibayaasha Soomaalida ee ku jira xabsiyada dalkaasi iyagoo la tashi la samaynaya safiirka Liibiya u fadhiya Soomaaliya.
Tigitaanka Ra’iisul wasaaraha dowladda KMG ee Soomaaliya ee dalka Liibiya ayaa imaanaya xili Maxaabiis farabadan ay ku jiraan xabsiyada dalka Liibiya islamarkaana qaarkood ay six un ula dhaqamaan ciidamada Amaankla ee dalka Liibiya.
Socdaalka uu Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid ugu amba baxay Dalka Liibiya ayaa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Madaxweyne Shiikh Shariif uu dalka Dibadda uga maqnaa, waxaana haatan dalka madax ka ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Shiikh Aadan Madoobe oo Kusime u ah Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaare ku xigeenka koowaad ee Xukuumadda Soomaaliya Prof. C/raxmaan Ibbi oo isna Kusime u ah Ra’iisal Wasaaraha.
Waa socdaalkii labaad oo uu Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid ku tago dalka Liibiya, dhawaan ayayna ahayd markii uu magaalada Sirta ee Dalka Liibiya uga soo qeybgalay shir looga hadlayay xaaladda Dalka Soomaaliya.
Taliska ciidanka Boolis dowladda KMG ee Soomaaliyeed oo maanta Sheegay in ciidamada Boliiska la kordhinayo islamarkaana dares cusub loo samaynayo.
Taliska ciidanka Boolis dowladda KMG ee Soomaaliyeed ayaa maanta Sheegay in ciidamada Boliiska la kordhinayo islamarkaana dares cusub loo samaynayo.
Kadib Xaflad si heer saro ah loo so agaasimay oo lagu maamuusayay kulan ay saraakiisha ciidamada boliisku ku yeeheen Magaalada Muqdisho islamarkaana ujeedadiisu ay aheeyd war galin iyo waxyaabaha u qabsoomay Boliiska ayaa maanta ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Kulanka oo ay ka hadleen saraakiisha sar sare oo ka tirsan ciidamada Boliiska ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiishii ka hadashay Madaxa hogaanka guud ee tababarada xariirka dibadda Sareeya gaas Bashiir Max’ed Jaamac (Bashiir goobe) waxa uuna sheegay in la kordhinayo bilaha soo aadan tirada ciidamada boliiska islamarkaana la siinayo ciidamada Boliiska tababar casri ah sida uu tilmaamay,waxaana uu intaasi raaciyay in uu jiro amar xukuumadeed oo ah in laga badalo ciidamada Boliiska dareeska ay wataan ee Kaakiga.
Sidoo kale taliyaha ciidanka boliiska dowladda KMG Gaashaanle sare C/xasan Cawaale Qeybtiid oo isna qudbad dheer ka jeediyay kulanka ayaa waxaa uu sheegay in tababarka la siinayo ciidamada Boliiska uu yahay mid ka dhacaya dalka gudihiisa iyo dibadiisa isagoona tilmaamay in tababarka lagu siinayo ciidamada Boliiska gudaha dalka ay gacan weyn ka geysanayaan saraakiisha Boliiska iyo ciidamo Boliis ah oo ka socda AMISOM oo dhawaan lagu soo biiriyay kuwa jooga Soomaaliya.
Ugu dambeyntii taliyaha ciidamada boliiska dowladda KM Gaashaanle sare Cabdi Xasan Cawaale qeybdiid ayaa waxa uu ugu baaqay saraakiisha boliiska ee ka soo qeyb gashay kulanka in boliisku uusan dhibaatayn dadka shacabka ah islamarkaana shacabka aysan ka cararin boliiska isagoona tilmaamay in wax badan laga qabtay maalmihii u dambeeyay dhibaatooyinkii ay ciidamada dowladda ka geysan jireen degmooyin ka mid ah gobolka Banaadir.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Agoosto, 2009.